China 150w Ufo High Bay China Manufacturers & Suppliers & Factory
150w Ufo High Bay - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 150w Ufo High Bay)
DLC kwadoro 150W UFO Led High Bay Light
DLC kwadoro 150W UFO Led High Bay Light Nke a UFO High Bay Ìhè na-enye n'elu 16500lm Ẹkot 600W omenala ọkụ. The UFO ikanam High Bay Light 150W nke kachasị mma maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ntanetị, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ngosi ihe ngosi, ụlọ ntụrụndụ, ámá egwuregwu, ụlọ ọrụ ntanetị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ...
150w ufo akwa n'ọnụ mere ìhè 150 UFO
150w ufo akwa n'ọnụ ada ìhè 150 ufo 1. 150W nnukwu ọnụ mmiri na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ufo nnukwu mmiri na -agba ọsọ ọhụrụ. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
100W edu ufo elu n'ọnụ mmiri 5000K
100W edu ufo elu n'ọnụ mmiri 5000K 1. 100W na-eduga ebe mmiri dị elu na ebe obibi, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. na- eduga nnukwu ọnụ mmiri dị elu bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
Na High Bay Light Fixtures site na bbier China anyị, ị nwere ike ịnweta ike ike ọkụ na nke a na High Bay UFO Led '50,000 hour ndụ. Kọmpụ a dị 150 watt Led High Bay Light Price na- anapụta 19,500 lumens nke mara mma, 5000K ìhè ìhè ọcha. Dochie ochie ochie Halita High Bay na Led High Bay Light Ahịa iji belata nkwụsi...
100W ada akwa mmiri ìhè 13000lm
100W ada akwa mmiri ìhè 13000lm 1. 100W na - eme ka ìhè ọkụ dị elu dị n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa 2. 100W Ufo elu mmiri ọkụ IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 100W ufo highbay bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
100W UFO Diana Elu Bay
100W UFO Diana Elu Bay 1. 5000K 100W ufo na-eme ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 100W Ufo elu mmiri ọkụ IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. na-eme ka ihe nkedo ọkụ dị mma bụ ihe ngosi ọhụrụ. Obere na ibu na ibu,...
150w Ufo High Bay 100W Ufo High Bay 200W Ufo High Bay 150W High Bay Rab Ufo High Bay 150 Watt Led Ufo High Bay 200w Ufo High Bay Light Topaz Ufo High Bay